एचएच बजाजले डिस्कभर १२५ सीसीको नयाँ अवतार ल्याउने
काठमाण्डौ । नेपालको सर्वाधिक बिक्री हुने मोटरसाइकल ब्राण्ड बजाजको आधिकारिक बितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि. ले बजाज डिस्कभर १२५ सीसीको नयाँ अवतार नेपाली बजारमा ल्याउन लागेको छ । डिस्कभर १२५ सीसी, यो विधामा बजारमा उपलब्ध अन्य बाइकहरुभन्दा हरेक प्रकारले पृथक रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । यो पृथक बाइकको लञ्च जनकपुरको...
मारुती सुजुकीले ल्यायो नयाँ मोडलको एर्टिगा, छिटै नेपाल आइपुग्ने
काठमाडौँ । मारुती सुजुकी कम्पनीले एर्टिगा मोडलको नयाँ संस्करण कार सार्वजनिक गरेको छ । ‘इन्डोनेशिया इन्टरनेशनल मोटर शो २०१८’ मा पहिलो पटक प्रदर्शन गएिको गाडी चाँडै नेपाल भित्र्याइने योजना कम्पनीको रहेको छ । पुरानो कार भन्दा डिजाईन समेत नयाँ भएको र साइज समेत ठूलो र इन्जीनको क्षमतासमेत वृद्धि गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।...
फोर्डको नयाँ गाडी आउँदै
काठमाण्डौ । यही मे १–३ गते ललितपुरको लबिम मलमा फोर्डको नयाँ गाडी फोर्ड फ्री स्टाइलको प्रदर्शन हुने भएको छ । एसयूभी जस्तो डिजाइन, नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजीले भरिपुर्ण यस फोर्ड फ्रीस्टाइल नेपालको पहिलो कम्प्याक्ट युटिलिटि भेइकल हुनेछ । फोर्डले ल्याएको यो नयाँ केयूभीले नेपालमा ह्याचब्याकभन्दा हल्का ठूलो गाडी चलाउने ग्राहकहरुमा...
१० % डाउन पेमेन्टमै गाडी कर्जा उपलब्ध गराउन माग, अटोमोवाइललाई चुरोटबिँडीसँग तुलना गरिएकोमा आपत्ति
काठमाण्डौ । नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले १० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी खरीदका लागि कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । नाडाको ४१ औं वार्षिक साधारणसभालाई सोमबार राति सोल्टी होटलमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । &lsq...
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमार्फत अटोमोवाइलको आयात तथा व्यवसायमा केही कडा नीति अवलम्बन गर्न सकिनेतर्फ संकेत गरेका छन् । उनले अर्थतन्त्रको विकासको गति सँगसँगै अटोमोवाइल क्षेत्रको विकास समेत हुनुपर्नेमा जोड दिंदै भने–‘निरपेक्ष ढंगले कुनै एउटा सेक्टर मात्र अगाडि बढ्न सक्दैन । नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स...
ड्याट्सनको नयाँ वर्ष मेगा अफर, गाडी खरीद गर्दा सुविधै सुविधा
काठमाण्डौ । नेपालमा ड्याट्सन गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्प प्रा.लि.ले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा “नयाँ वर्षको मेगा अफर” योजना प्रस्तुत गरेको छ । यो योजना चैत १९ गतेदेखि जेठ १८ गतेसम्म ड्याट्सन गाडीको खरिदमा लागू हुनेछ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले ड्याट्सन गाडीको खरिदमा निश्चित उपहार स्वरुप हरेक एक जोडीले मलेसियाको...
काठमाण्डौ । नेपालका लागि फोर्ड गाडीका आधिकारीक बिक्रेता जिओ अटोमोवाइल्सले शुक्रबार एक समारोहका बीच विश्वविख्यात फोर्ड मुस्ताङ्गको अनावरण गरेको छ । गत वर्ष नाडा अटो शोमा फोर्ड मुस्ताङ्ग प्रदर्शन गर्दा गाडीका पारखीहरुद्धारा उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेपछि उक्त गाडी नेपाल भित्रयाएको हो । फोर्ड मुस्ताङ्ग विश्वमा नै आफ्नो...
काठमाण्डौ । भारत र नेपालक कैयन अटोमोवाइल कम्पनी आफ्नो सर्भिस सेन्टरमा गाडीलाई सफा गर्न वाटरलेस कार वास सिस्टमको प्रयोग गरिरहेका छन् । हालै मर्सिडिज बेञ्जले भारतमा वाटरलेस कार वास सोल्युसनको सुरुवात गरेको छ । मर्सिडिज बेञ्जले भारतमा क्वीक एण्ड क्लीन प्रडक्ट लञ्च गरेको मिडियाहरुले जनाएका छन् । यसअघि मारुती सुजुकी, हुण्डाई तथा...
सुजुकी सेलेरियो टेस्ट राइड अभियानको ३ महिना पूरा
काठमाण्डौ । सुजुकीका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिङको अटोमोटिभ विभाग सीजी मोटोकर्पले राष्ट्रव्यापी सुजुकी सेलेरियोकोे टेस्ट राइड अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । कावासोती, हेटौडा, वीरगञ्ज, जनकपुर, बिर्मामोड, बुटवल, भैरहवा, जीतपुर र दाङमा टेस्ट राइड कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै सो अभियानको तेस्रो...
काठमाण्डौ । यामाहाले मिस नेपाल २०१८ का प्रतियोगीहरुका लागि सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नेपाल ट्राफिक प्रहरी र यामाहाका तालिमप्राप्त प्रशिक्षकले उनीहरुलाई सडक दुर्घटनाको कारण, यसको न्यूनीकरण र रोकथामबारे जानकारी गराएका थिए । मिस नेपाल प्रतियोगीहरुलाई ट्राफिक प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनी र...
काठमाण्डौ । जलेश्वरका रतिशकुमार झा बिहीबार अलि व्यस्त थिए । बीएसएम गरेर उनका भाइ सतिशकुमार भारतको कलकत्ताबाट फर्कंदै थियो । काठमाडौंमै बसोबास गर्ने गरी फर्किरहेका भाइका लागि एउटा मोटरसाइकल किन्ने घर सल्लाह भएको थियो । त्यसैअनुसार उनी कान्तिपथस्थित यामाहाको सोरुममा दिउँसा पुगेका थिए, भाइलाई ‘सप्र्राइज गिफ्ट’ दिन । ‘भाइ घर...